Otu esi emepe faịlụ CBR - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 23/06/2022 20:00 | Aplicaciones
Faịlụ dijitalụ anyị nwere ike ịhụ na ntanetị dị iche iche nwere ike ịnụ ụtọ site na ngwaọrụ dị iche iche na PDF, Okwu, JPG ma ọ bụ ndọtị ndị ọzọ nwere ike ịbụ oge mbụ ị hụrụ ha na nke enwere ike imeghe naanị site na ngwa ụfọdụ. Taa, anyị ga-ekwu maka otu esi emeghe faịlụ CBRDị ka ọtụtụ n'ime unu maraworị, ha bụ faịlụ nwere onyonyo dị iche iche nke enwere ike ịlele site na iji ngwa ụfọdụ.
Ụdị faịlụ a na-emetụtakarị ụwa nke ihe ọchị., ọ bụ ezie na enwere ike ịhụ ya na ụdị faịlụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụ ihe nkiri n'anya, n'ezie ịchọrọ ịnụ ụtọ ha ihe karịrị otu ugboro, mana ị maghị ka esi emepe faịlụ CBR kwuru, nke a ga-akwụsị n'ihi aghụghọ anyị ga-enye gị n'akwụkwọ a.
1 Kedu ihe bụ faịlụ CBR?
2 Mmemme imepe faịlụ CBR na Windows
2.1 Ihe ngosi
3 Mmemme imepe faịlụ CBR na Mac
3.1 Akwụkwọ na-atọ ọchị
3.2 Onye na-agụ DrawStrip
4 Ngwa imeghe faịlụ CBR na gam akporo ma ọ bụ IOS
4.1 Ihe ọchị
Kedu ihe bụ faịlụ CBR?
Faịlụ CBR ndị a dị ka ọtụtụ ndị ọzọ anyị ga-ahụtala ihe karịrị otu ugboro, ZIP ma ọ bụ RAR, usoro akwụkwọ mpịakọta. Otu n'ime isi ihe dị iche nke faịlụ CBR bụ ndị a nwere akụkọ juputara n'usoro onyonyo. A na-edobe onyonyo ndị a n'usoro akọwapụtara, nke mere na mgbe ị na-anụ ụtọ ha, a na-eme ya n'usoro.
A na-eji faịlụ CBR, dị ka anyị gosiworo na mmalite nke mbipụta, iji chekwaa ihe ọchị ọchị. Ọ bụ usoro, nke na-adịghị eweta ọdịda ọ bụla mgbe decompressing nwere ngwa maka ya dị ka WinZip.
Onye mepụtara usoro faịlụ a bụ David Ayton, onye n'ime 90s mepụtara software nke eji ele ihe nkiri na-enweghị nsogbu, software a bụ CDisplay.. Mwepụta nke mmemme ọhụrụ a bụ nnukwu mgbanwe maka ụwa nke ikiri onyonyo dị ugbu a.
N'ihi CDisplay, a na-ahụ usoro onyonyo n'ofe ihuenyo yana oke nkọ.z, mma na nkọwa, na-asọpụrụ usoro akara mgbe niile mgbe ị na-agụ ihe omume ndị a kọrọ n'etiti ibe.
Mbipụta “CB”, ụdị ụdị faịlụ a, sitere na akwụkwọ ọchị ọchị, usoro emepụtara nke ọma iji nwee ike imepe ya site na iji ngwa CDisplay. Ọ bụrụ n'oge nbudata faịlụ ndị a ị na-elele leta ikpeazụ, nke a na-ezo aka n'ụdị mkpakọ ejirila, ya bụ, ọ bụrụ na ọ bụ site na faịlụ RAR, ọ ga-apụta .cbr, n'aka nke ọzọ ọ bụrụ na ọ bụ ZIP, faịlụ ahụ ga-apụta aha ya bụ .cbz.
Ọ bụrụ na ị dịla njikere ịga n'ihu ma ọ bụ malite ịnụ ụtọ akụkọ ihe nkiri kacha amasị gị, Anyị na-ewetara gị nhọrọ nke ụfọdụ mmemme kacha mma iji budata ma mepee ụdị faịlụ a n'ụzọ dị mfe na enweghị njehie, na ngalaba na-esote. Anyị ga-ahụ ọ bụghị naanị mmemme egosipụtara maka ndị ọrụ Windows ahụ, kamakwa maka ndị na-eji Mac na mgbakwunye na ngwa mkpanaka maka Android na IOS.
Mmemme imepe faịlụ CBR na Windows
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Windows ma ịchọrọ ịma ma mụta ka ị ga-esi mepee faịlụ CBR, ị nwere ike nweta otu n'ime mmemme ndị a anyị ga-ekwu.
Anyị enweghị ike ikwu banyere mmemme a na ndepụta anyị ma kelee onye kere ya maka echiche nke ime ụdị usoro a na ihe niile dị n'akụkụ ya. CD ngosi, Ọ bụ mmemme dị mfe maka kọmputa, mana n'otu oge ahụ na-arụ ọrụ nke ọma Ma na-echefughị ​​na ọ bụ kpam kpam free.
Ọ bụ mmemme ejirila ya rụọ ọrụ nke ọma yana otu n'ime ọkacha mmasị nke ndị na-atọ ọchị. Ọ na-enye ahụmahụ ọgụgụ dị ebube, inwe ike ịgụ ụdị dị iche iche dị ka PDF, CBR, CBZ, na ndị ọzọ. A na-etinye ihe nkiri ndị na-atọ ọchị n'ime ihe dị ka sekọnd na-enweghị atụfu àgwà na ịkwanyere ụdị nkọwa niile ùgwù.
Ihe omume ọzọ dị oke mma, n'ihe gbasara ịgụ faịlụ CBR egosiri maka ịgụ ihe ọchị na kọmpụta. Site na ngwanrọ a, ị nwere ike ọ bụghị naanị ịnụ ụtọ akụkọ ndị a na-akọ n'etiti ibe ihe nkiri, mana ị nwekwara ike dezie ọdịnaya dijitalụ.
Isi ihe dị mma maka ndị ahụ na-ekwo ekworo maka ịkekọrịta faịlụ ha, bụ nke ahụ Gonvisor na-enye gị ohere iji chekwaa akwụkwọ ọgụgụ gị site na paswọọdụ. Nhọrọ nke na-enye uru maka mmemme a.
Mmemme imepe faịlụ CBR na Mac
N'ebe a ebe ị nọ, anyị ga-ahụ mmemme dị iche iche nke ndị ọrụ Mac ga-enwe ike imeghe faịlụ CBR n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Akwụkwọ na-atọ ọchị
Site na mmemme mbụ a anyị na-ebute na ndepụta a, ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ike imepe faịlụ CBR, kamakwa faịlụ CBZ na PDF. Site na interface dị mfe, ị ga-enwe ike ịnyagharịa ngwa ngwa site na ọdịnaya niile ọ na-enye gị. A na-eme ka nke a dịkwuo mfe site na mkpịsị mkpịsị mkpịsị aka ewepụtara gị.
Otu n'ime ihe kacha amasị ya bụ nke ahụ na-akwado ịgụ na ikiri ibe abụọ. Site na nhọrọ ngosi a, ebumnuche bụ iṅomi ọgụgụ ihe ọchị anụ ahụ, dịka a ga-asị na ị na-eji mkpịsị aka gị tụgharịa ibe ndị ahụ site n'aka nri gaa n'aka ekpe. Ị nwere ike ịnweta mmemme a na ngwaọrụ gị site na Ụlọ Ahịa App maka euro 5.49.
Onye na-agụ DrawStrip
Dịka ọ dị n'ọtụtụ mmemme ndị anyị na-ekwu maka ya, DrawnStrip Reader dakọtara na ụdị usoro ndị ọzọ na mgbakwunye na CBR, dịka; CBZ, CB7. CBT, ZIP, RAR, n'etiti ndị ọzọ. Akụrụngwa anyị na-ekwu maka ya bụ nke kachasị maka ihuenyo retina, ọ na-enyekwa gị ohere ịmegharị faịlụ ndị a na usoro ndị ọzọ.
Ọ na-enye gị ohere iwepụta onyonyo na faịlụ ọkacha mmasị gị, wee nwee ike kesaa ha. Isi ihe dị mma bụ na ọ na-enye gị nchapụta na mgbanwe dị iche iche iji mee ka ọ kwekọọ na mmasị gị. Ị nwere ike nweta DrawnStrip Reader site na ịzụrụ ya na Ụlọ Ahịa Apple maka ọnụ ahịa 4.49 euro.
Ngwa imeghe faịlụ CBR na gam akporo ma ọ bụ IOS
N'akụkụ ikpeazụ a, anyị ga-ahụ usoro ngwa egosipụtara ka ha nwee ọ enjoyụ ụdị faịlụ a na ngwaọrụ mkpanaka anyị na-enweghị ụdị nbudata ọ bụla ma ọ bụ njehie ngosi.
Otu n'ime ndị kasị mma ngwa na ị ga-enwe ike ịhụ na ahịa maka gam akporo ngwaọrụ, nke ị nwere ike ịnụ ụtọ ma faịlụ CBR na CBZ. Ọ bụghị naanị na ọ na-anọ ebe ahụ, mana ọ dakọtara na ụdị usoro ndị ọzọ dị ka JPG, GIF, PNG ma ọ bụ BMP.
Ọ bụ ngwa efu kpamkpam, mana nwere ọdịnaya mgbasa ozi, nke ị nwere ike wepu ma ọ bụrụ na ịzụtara ngwa ngwungwu. Rịba ama na ọ bụghị naanị na ọ na-enye gị ohere iwetu faịlụ CBR na CBZ ozugbo, mana ị nwekwara ike ịnweta onyonyo n'onwe gị.
Maka ndị ọrụ IOS, anyị na-ewetara gị nke a Ngwa dị mfe nke ebumnuche ya bụ inye gị ohere ịgụ faịlụ CBR na CBZ. Site na ya, ị nwere ike nweta faịlụ echekwara na saịtị dijitalụ dị iche iche dị ka Dropbox, Drive, OneDrive, wdg.
A na-eme nbudata faịlụ ndị ahọpụtara site na webụsaịtị ọ bụla ozugbo na ngwaọrụ mkpanaka gị. Dị ka ọ dị na mbụ ikpe, ọ bụ a kpamkpam free ngwa dị na Apple ụlọ ahịa.
Ka ọ dị ugbu a, ndepụta anyị nwere atụmatụ dị iche iche maka mmemme na ngwa dị ka ị nwere ike imikpu onwe gị na akụkọ na-atọ ụtọ nke ụwa ihe ọchị. Naanị ị ga-amata, nke mmemme ma ọ bụ ngwa egosipụtara dịka ngwaọrụ ebe ịchọrọ ịmalite ịgụ, nbudata, wụnye na ịmalite ịnụ ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Aplicaciones » Esi emeghe faịlụ CBR